Accessibility | WordPress.org Malagasy
Ny Authoring Tool Accessibility Guidelines version 2.0, na ATAG, dia fitambarana toromarika izay mifehy ny fomba famoronana fitaovana fanorenana tranonkala izay sady mitsinjo ireo manana fahasembanana no sady mamporisika ny rehetra hitsinjo azy ireo na inona na inona vokarina.
Ny WordPress accessibility coding standards dia mitaky fomba fanoratana kaody vaovao izay manaraka ny fenitra tadiavin’ny Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) laharan’andiany 2.0, niveau AA. Tanjona fanampiny aorian’izany ny fahatratrarana ny fenitra ATAG.
Ny application manaraka ny fenitra ATAG 2.0 dia application sady mora ampisain’ny olona manana fahasembanana no sady manampy sy mamporisika izay mampiasa azy rehetra mba hitsinjo ireo voalohany amin’izay zavatra vokarina, ary hanoro sy hanitsy ireo fahadisoana mety hisakana izany, na tsy mampiasa fitaovana ankoatra ilay application aza.
Mbola tsy manaraka ny fenitra ATAG 2.0 hatreto WordPress, kanefa manome toky fa hiezaka hatrany ny hametraka fitaovana hahafahan’ny olona izay manana fahasembanana hanorina sy hamokatra, mandraha-pahatratrarana ny fenitra ATAG rehetra.